လူ့လောကရောက်ရုံရှိသေးတယ်Covid – 19ကြောင့်သေကွဲရောရှင်ကွဲရောတစ်ပြိုင်ထဲခံလိုက်ရတဲ့မိသားစု – Myanmar Update News
လောကဓံ ပြင်းလွန်းတယ်။လူ့လောကရောက်ရုံရှိသေးတယ်Covid – 19ကြောင့်သေကွဲရောရှင်ကွဲရောတစ်ပြိုင်ထဲခံလိုက်ရတဲ့မိသားစု လောကဓံ ပြင်းလွန်းတယ်။
ရင်နာစရာပဲလေ ရောဂါဆိုးကြီးရယ်အဒေါ် နှင့် တူမ Positive (မှ) Negativeဖြစ် အိမ်ပြန်ခရီး ရန်ကုန် ခလေးဆေးရုံမှ မအူပင်အပိုင်ရွာဘက်က နေအိမ်သို့
ကရုဏာ(မအူပင်မြို့) အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် (003) ဖြင့်ပြန်လည်ခေါ်ပေးခဲ့ ဇတ်လမ်းက
16ရက်နေ့မှာ ခွဲမွေးတယ်. . . 18ရက်နေ့မှာ ကလေးရော၊အမေပါ +တွေ့တယ်တဲ့. . . 22 ရက်နေ့မှာ အမေကို ဖောင်ကြီးပို့တယ် အဲဒိနေ့မှာပဲ အမေက ဆုံးသွားတယ် အဖေက ဆေးရုံစောင့်ရင်း + ဖြစ်ပြီး တနေရာမှာQဝင်နေရတယ်။
ကလေးက မနက်ဖြန် သက်သာလို့ ဆေးရုံကဆင်းရမယ်။ဒီမိသားစုရဲ့ ကံကြမ္မာဟာကိုဗစ်ဆိုတာကြီးသာ မရှိခဲ့ရင် မွေးပြီးတာနဲ့ မိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါး အိမ်ပြန်ရမယ့်ဇတ်။
အခုတော့ သေကွဲရောရှင်ကွဲရော လူ့လောကရောက်ရုံရှိသေးတယ် တစ်ပြိုင်ထဲခံလိုက်ရတဲ့ လောကဓံ ပြင်းလွန်းတယ်။အမေက သွးနုသားနု မှာ ကလေးနဲ့လည်းခွဲရတယ်၊Qထဲ မှာတစ်‌ယောက်ထဲလည်း နေရတာရယ်နဲ့ ဝေဒနာပေါင်းစုံ နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ် ကိုခံနိုင်ခဲ့ပုံ မရဘူး။
ဒီမှာဆို ကလေး နဲ့ အမေ ခွဲမယ် မထင်ဘူး၊သေချင်မှသေမယ်(ကိုယ့်အတွေးသက်သက်ပါ)ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကံသက်တမ်းရှိသလောက် လူဖြစ်ရန်ရက်တွေကျန်သေးတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး သောကိုဗစ်လူနာကလေး မနက်ဖြန် ဘေးကင်းစွာ အဘိုး၊ဘွား နဲ့ အဒေါ်တွေ အိမ်ကိုချောမွေ့စွာပြန်ရောက်ပါစေ။ credit-ညိုလူကြီး NayLinAung
လူ့လောကရောကျရုံရှိသေးတယျCovid – 19ကွောငျ့သကှေဲရောရှငျကှဲရော တဈပွိုငျထဲခံလိုကျရတဲ့ မိသားစု
လောကဓံ ပွငျးလှနျးတယျ။ လူ့လောက ရောကျရုံ ရှိသေးတယျ Covid – 19ကွောငျ့ သကှေဲရောရှငျကှဲရော တဈပွိုငျထဲခံလိုကျရတဲ့မိသားစု လောကဓံ ပွငျးလှနျးတယျ။
ရငျနာစရာပဲလေ ရောဂါဆိုးကွီးရယျအဒျေါ နှငျ့ တူမ Positive (မှ) Negativeဖွဈ အိမျပွနျခရီး ရနျကုနျ ခလေးဆေးရုံမှ မအူပငျအပိုငျရှာဘကျက နအေိမျသို့
ကရုဏာ(မအူပငျမွို့) အရေးပျေါလူနာတငျယာဉျ (003) ဖွငျ့ပွနျ လညျချေါပေးခဲ့ ဇတျလမျးက
16ရကျနမှေ့ာ ခှဲမှေးတယျ. . . 18ရကျနမှေ့ာ ကလေးရော၊အမပေါ +တှတေ့ယျတဲ့. . . 22 ရကျနမှေ့ာ အမကေို ဖောငျကွီးပို့တယျ အဲဒိနမှေ့ာပဲ အမကေ ဆုံးသှားတယျ အဖကေ ဆေးရုံစောငျ့ရငျး + ဖွဈပွီး တနရောမှာQဝငျနရေတယျ။
ကလေးက မနကျဖွနျ သကျသာလို့ ဆေးရုံကဆငျးရမယျ။ဒီမိသားစုရဲ့ ကံကွမ်မာဟာ ကိုဗဈဆိုတာကွီးသာမရှိခဲ့ရငျ မှေးပွီးတာနဲ့ မိသား စုပြျောပြျောပါးပါး အိမျပွနျရမယျ့ဇတျ။
အခုတော့ သကှေဲရောရှငျကှဲရော လူ့လောကရောကျရုံရှိသေးတယျ တဈပွိုငျထဲခံလိုကျရတဲ့ လောကဓံ ပွငျးလှနျးတယျ။အမကေ သှးနုသားနု မှာ ကလေးနဲ့ လညျးခှဲရတယျ၊ Qထဲ မှာတဈ‌ယောကျထဲ လ ညျး နရေတာရယျနဲ့ ဝဒေနာပေါငျးစုံ နှိပျစကျတဲ့ဒဏျ ကိုခံနိုငျခဲ့ပုံ မရဘူး။
ဒီမှာဆို ကလေး နဲ့ အမေ ခှဲမယျ မထငျဘူး၊ သခေငျြမှ သမေယျ (ကိုယျ့အတှေးသကျသကျပါ)ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ကံသကျတမျးရှိသ လောကျ လူဖွဈရနျရကျတှကေနျြသေးတဲ့ အသကျအငယျဆုံး သောကိုဗဈလူနာကလေး မနကျဖွနျ ဘေးကငျးစှာ အဘိုး၊ဘှား နဲ့ အဒျေါတှေ အိမျကိုခြောမှစှေ့ာပွနျရောကျပါစေ။ credit-ညိုလူကွီး NayLinAung